China ndị a pịrị apị-YA204 ndị na-emepụta ihe na ngwaahịa | Yingjiwei
Punching nkà panel YA602
Ebube marble panel YC104
Comi marble panel YC103
Comi marble panel YC102
Comi marble panel YC101
Ogwe ọka osisi YC205
Ogwe ọka osisi YC203
Ogwe ọka osisi YC202
Mmanụ acomụ na okpokoro YB102
Ihe a pịrị apị-YA205
Ihe a pịrị apị-YA202
Mba nke Si Malite: China
Okwu ahia: EXW, FOB, CFR na CIF
Ebute oge: 7-20 ụbọchị na-adabere na nke ukwu.
Port nke loading: Guangzhou ma ọ bụ Shenzhen
Mentskwụ ụgwọ okwu: T / T ma ọ bụ L / C
Atụmatụ aluminom pịrị apị
3. Ọ nwere ike esichara n'ime mgbagwoju anya shapes dị ka kwa imewe
A na-eji oghere dịgasị iche iche ma ọ bụ usoro dị iche iche dị na aluminom arụ ọrụ site na igwe ihe osise. Site na nhazi ihe osise, efere aluminom di iche-iche ka enwere ike gbasaa ya na uche nke ohere ma nwee oru nke mbufe oku na ikuku. Mgbanwe na ọkụ nke enviroment dị iche iche dị na mpụga maka ọgwụgwọ pụrụ iche, na-eme ka akara ahụ dịkwuo ndụ ma maa mma. N'adịghị ka echiche ịme ngosi uwe ọdịnala, ọ dabara adaba maka klọb ọgbara ọhụrụ, ihe ndozi ụlọ na ọfịs.
Enwere ike iwere ogwe osisi aluminom dika efere aluminom, enwere ike igbutu ya ma debe oghere ya na 10.0mm. A na-ejikarị ihe dị iche iche eme ihe, ọ bụ usoro nhazi dị mma maka ịcha oke precisioin dị iche iche, usoro buru ibu na usoro ọdịdị pụrụ iche. Enwere ike ịkpụ osisi aluminom n'ime ngwongwo aluminom na-enweghị nke dị iche na nha dị ka atụmatụ ndị ahịa. Ma enwere ike ịmepụta ya n'ụdị dị iche iche dịka uko ụlọ, mgbidi mgbochi, kọlụm na ihe ndị ọzọ.
Ofdị punching art veneer: ụkpụrụ punching, akpụ punching, arọ punching, ultra mkpa punching, Micro oghere punching, akara ọnwụ punching, laser punching, wdg
Anyị na-asọpụrụ ọdịdị ma kwekọọ n'echiche dị elu nke okike. Mgbe ụlọ ọrụ mmepụta ihe na obodo mepere emepe ebe obibi anyị, ndị ọrụ aka anyị na-agbasi mbọ ike ịchọta gburugburu ebe obibi na-agbanwe onwe ha, wepụta ụdị nke abụọ, ma chọọ gburugburu ebe obibi anyị mma. Dị ka eserese eserese pụrụ iche mepere emepe e ji mara omenala, e ji mara ije, e ji mara odida obodo, e ji mara mmụọ. Ndị ọrụ aka anyị ji nlezianya dekọọ mgbanwe nke obodo ahụ.
Aha ngwaahịa Aluminium pịrị ogwe
Nkebi Nke YA204
Ihe onwunwe Aluminom
Aluminom alloy 1100 H24 / 3003 H24 / 5005
Ọgwụgwọ Ihe mkpuchi PVDF / Ihe mkpuchi ntụ ntụ / Anodized
Agba Agba ọ bụla RAL, agba siri ike, agba ọla
Ọkpụrụkpụ 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm / 5.0mm
Nha 600 x 600mm / 600 x 1200mm / 1300 x 4000mm / ahaziri nha
Nkwakọ ngwaahịa Standard mbupụ osisi crate
Ingzọ nhazi Slotting, ịcha, mpịachi, ekwe, curving, ịgbado ọkụ, mesikwuru, egweri, sere na nkwakọ.
Ngwa Adabara ime ụlọ na n'èzí, ogidi na ogidi, mbara ihu, awnings, n'ọnụ ụlọ ogologo facade, nkwari akụ, ụlọ ọgwụ, obibi ụlọ, Amọraịt, ọdụ, mgbatị, ọdụ, ahịa, opera, ámá egwuregwu, ụlọ ọrụ na skyscraper
Nke gara aga: Perforated panel-YA313
Osote: Mmanụ acomụ na okpokoro YB101